Wedzera Traffic - 25 Akaratidza Maitiro Ekukura
Wedzera Traffic neaya makumi maviri neshanu Proven Strategies
China, Gunyana 15, 2011 Svondo, Zvita 4, 2011 Douglas Karr
Wedzera traffic… inguva yandinonzwa ndichidzokorora yadzokorora. Hazvireve kuti ini handitendi mukuwedzera kwetraffic, ndezvekuti kazhinji vashambadziri vari kuyedza zvakanyanya kuti vawedzere traffic zvekuti vanokanganwa kuyedza kuwedzera kuchengetedza kana kutendeuka pamugwagwa wavanotova nawo. Heano epamusoro makumi maviri neshanu nzira dzakaratidzirwa dzatakaisa kune edu ewebhu zvivakwa uye vatengi vedu kuwedzera traffic ... uye kuona kuti ivo vari kuwana mhedzisiro nazvo!
Nzira dzekuwedzera Traffic:
Gadzirira yako saiti ye kutsvaka injini. Pasina kupokana, iyi ndiyo nzira iri nyore yekuwedzera traffic… uye kupfuura zvese, imigwagwa yakakodzera iri kukutsvaga! Nzwisisa mazwi akakosha aunoda kushandisa iwo vashandisi veinjini yekushandisa.
shandisa kutarisa-kubata misoro. Wanga uchiziva here kuti vanhu vanongobaya pa20% yemusoro wenyaya wavakaverenga? (Ini handina kusvikira ndaverenga yaVince Robisch pambiru). Iwe unogona kuwedzera traffic zvakanyanya nekutarisa zvakanyanya kutarira pazita rako sezviri mukati.
Shandisa kumanikidza meta tsananguro pane ako mapeji uye blog mablog. Tsananguro dzeMeta dzinogona kuve iwo mupendero wekukwirisa-kuburikidza nemitengo mumapeji ekutsvaga enjini dzekutsvaga, iyi yanga iri zano rakakosha rekuwedzera traffic nevatengi vedu.
Tarisa wako chiperengo uye girama. Vamwe vanhu vanonyatso kusimudzira nezve zviperengo uye girama, vachisiya saiti pavanongoona chikanganiso. Ini ndichangobva kuwana CheckDog apo mumwe munhu akataura kwandiri kukanganisa kukanganisa uye ini ndakanga ndisingazivi kuti ndeipi peji.
Tanga blog uye kazhinji uye zvinowirirana. Paunonyanya kunyora, mukana wakawanda uripo wekuti mumwe munhu awane zvemukati. Kunyanya kuenderana iwe, vanhu vazhinji vanodzoka kuzowana zvinyorwa zvitsva.
Chengetedza mari zviwanikwa. Dhizaini yakanaka inokwezva, dhizaini yakaipa inodzora vatengi. Kune akawanda masaiti makuru kunze uko ane zvisingaite zvemukati izvo zvisiri kungokwezva kutariswa nekuti zvakangoipa zvakashata. Magadzirirwo makuru haafanire kukubhadharira zviuru… kune akawanda masosi enzvimbo ane zvinoshamisa marongero uye aesthetics isingasviki $ 20!
Wedzera chitupa chako kana vashandi vako kune yako saiti. Vanhu havadi kuverenga kushambadzira drivel, ivo vanoda kunzwa sekunge ivo vari kuverenga meseji kubva kune chaiye munhu. Vanhu vazhinji vanozokwezva kune yako saiti kana blog uye vanhu vazhinji vanodzoka kublog rako kana ivo vachiziva kuti ivo havasi kubata nemusingazivikanwe zvemukati munyori. Ndinokurudzira zvikuru kushandisa Google Profiles uye rel tag kuisa mapikicha pane zvawatsvaga, zvakare!
Wedzera yako kero yekugara uye nhamba yenhare kune yako saiti. Zvekare, mumwe munhu ari kuvanza kuzivikanwa kwake anoonekwa seasina kuvimbika. Rega vanhu vazive kuti vakuwane sei… uye unogona kushamisika nekushanya kwaunowana pavanodaro! Zvakare, kuwedzera kero chaiyo pane yako saiti kunogona kusimudzira mikana yako yekuwanikwa mune dzekutsvaga mitsva mitsva.
Sanganisa a marongero efoni kune yako saiti kana blog. Smartphones dzakaputika mukuzivikanwa. Vashandisi ve smartphone pavanoona kuti wagadzira yako saiti mudziyo wavo, vanodzoka. Wedzera traffic yemafoni uye yakazara traffic ichawedzera futi!
Kurudzira pasocial media kuvepo. Kana mumwe munhu achikuda kana kukutevera, iwe uchangobva wawedzera akakodzera anokwanisa mushanyi kunetiweki yako. Kukura network yako uye iwe uchakura huwandu hwetraffic kubva pasocial network yako. Kumbira network yako kuti ubatanidzane newe kuitira kuti iwe ugone kuzvigadziridza nguva nenguva neako akakodzera zvemukati.
Wedzera tsamba! Vashanyi vazhinji havazowane zvavanoda… asi kana saiti kana bhurogu ichifanira, vanokutevera pane vezvenhau kana kutonyorera kune tsamba rako. Paunobatanidza kudzokera kune yako saiti, yako tsamba yematsamba ichawedzera traffic pakarepo. Email marketing ine yakanakisa kudzoka pane kudyara ... uyezve zvirinani kudzoka pane traffic!
Wedzera zvinongedzo kumasiginecha ako uye mavawedzere kune ese email anobuda. Iwe hauzomboziva kuti chii chauchazobata kutarisisa kweumwe munhu ... uye zviripachena, uchitova nehukama nemunhu wauri kutumira tsamba
shandisa inoshanda mamenyu ekufamba. Kubudirira kufamba kunoita kuti saiti yako ive nyore kushandisa uye inochengeta traffic kudzoka Kuiswa kwakakurumbira kwezvinhu zvekufambisa kuchaitawo kuti injini dzekutsvaga dzizive kuti ndezvipi zvinhu zvakakosha pane yako saiti.
Tipei maturusi ekudyidzana kunge macalculator, survey, uye mienzaniso. Vanhu havaverenge zvakanyanya sezvaunofunga… vazhinji vari kungotsvaga chishandiso chakakodzera kuti vawane ruzivo rwavanoda. Calculator yakakura pane saiti ichaita kuti vanhu vadzokere nekudzokorora.
Shandisa mifananidzo, machati uye infographics. Mifananidzo uye machati hazvibatsire chete vanhu kuti vanzwisise uye varangarire ruzivo, mazano senge infographics zvinoita kuti zvive nyore kugovana iwo ruzivo uye kuupfuudza. Zvakare, mazhinji masocial masaiti ari kusanganisira ekuratidzwa kwemifananidzo senge muFacebook.
Kurudzira vamwe vatungamiriri veindasitiri uye mablog avo. Kutaurira vezera rako inzira huru yekutora nzeve yavo. Kana zvirimo zvako zvakakodzera, ivo vachazvigovana nevateereri vavo. Vazhinji vevatungamiriri ivavo vane vateereri vakawanda kwazvo. Kazhinji, kana mumwe wandinoshanda achitaura nezvangu, ndinomanikidzwa kuti vese vataure pane yavo saiti uye vagovane chinongedzo munharaunda pamwe nevateereri vangu. Kana zvirimo zvisinganzwisisike, ini ndinotogona kugovana posvo nezvazvo. Izvo zvichagadzira marongero kumashure kubva kune yangu saiti kuenda kune yavo, mutsva mutero we traffic kuyerera kuburikidza.
Wedzera magariro mabhatani uye social bookmarking zvishandiso se Twitter, Facebook, LinkedIn, Google uye StumbleUpon kugonesa izwi remuromo. Izvi zvinobvumira vateereri vako kuti vakukurudzire ... mahara .. kune vateereri vavo! Zvinowanzoreva zvakawanda zvakanyanya kana mumwe munhu mu network yako achikurudzira zvemukati. Kutarisa kugovana munharaunda kwakaburitsa kuwedzera kukuru kwetraffic iyo saiti yedu yakamboona.
Bhadhara kukwidziridzwa. Kana iwe ukaisa simba mune inonakidza posvo, nei iwe waisazobhadhara kuti uikurudzire? Kana iwe uine hukama hwehukama pane yako saiti sezvatinoita, vamwe vashanyi vanonyara kana vaona ma1 nema0 pane ako magariro mabhatani Kune makuru maratidziro kunze uko kwevanhu ekuti vataurezve, senge uye nekuisa +1 zvemukati zvako zvishoma kana pasina
Spruce kumusoro kwekare zvemukati. Kungoti zvemukati zvako ndezvekare, hazvireve kuti zvapera. Dzivisa kushandisa misi mukuvakwa kwe URl uye kutumira pazvinyorwa - iwe unoda kuve nechokwadi chekuti vateereri vako vanofunga kuti unoshanda uye zvemukati zvichiri kushanda. Kamwe chete pamwedzi, tarisa zvemukati zviri kuseta mushe uchishandisa chishandiso senge Semrush uye gadzirisazve iwo mazita emazita, zvemukati uye meta dhata yemazwi akakosha ari pachinzvimbo.
Dhiraivha yakawanda mavhoriyamu emigwagwa ine makwikwi, kukwidziridzwa uye mibairo se PunchTab. Aya maitiro haagare achiburitsa vashanyi vanonyanya kukosha, asi nekuti ivo vanogadzira buzz uye kusimudzira, iwe unozochengetedza imwe yemotokari nyowani.
Usazvidza iyo simba renhau dzetsika, kunyanya kana usiri kushanda mune yehunyanzvi chikamu. Zvinotaurwa mumaindasitiri nemagazini, mharidzo dzekutengesa, chibatiso, makadhi ebhizinesi, kunyangwe mavovoisi ... kupa vanhu URL kune yako webhusaiti webhusaiti, blog, uye masocial sites zvichawedzera traffic. Zvehukama neveruzhinji vanhu vane hukama nemaindasitiri uye vane nguva uye tarenda yekumisikidza nyaya yako… iwe hauna. Mamwe emigwagwa yedu yakanakisa anga ari kuburikidza nevatori venhau vechivanhu mumakambani makuru enhau avo vakanyora nezvedu kana kutibvunzurudza.
Govera zvirimo mukati maindasitiri mapoka on LinkedIn uye maforamu. Vamwe vanhu SPAM vanobuda mune mamwe mapoka, asi vamwe vari kushingairira - uye kana vanhu vakaona kuti unobatsira uye uchiziva zvinhu zvako, vanozopedzisira vadzoka kune yako saiti. Ivo vanogona zvakare kuwana hurukuro dzenyu kuburikidza nekutsvaga.
Kungofanana nemaindasitiri mapoka anobatsira kuwedzera traffic, ndozvinoitawo kupindura mibvunzo yakakodzera Mubvunzo neMhinduro nzvimbo. Mamwe acho anotokutendera kuti utarise chinongedzo mumhinduro dzako. Q&A nzvimbo dzaiputika mukuzivikanwa asi dzinoita senge dzakadzikira zvishoma. Nekudaro, ndipo apo vanhu vari kutsvaga mhinduro - uye kana iwe uine chinongedzo kune zvako zvemukati pamubvunzo wakanaka, vanozozvidzorera kune yako saiti.
Kutsvaga uye kuongorora munharaunda yemashoko akakosha ataurwa mukukurukurirana uko saiti yako kana blog inogona kubatsira nazvo. Iwe une zviyeuchidzo zvakagadzirirwa mazita emukwikwidzi, mazita echigadzirwa, maindasitiri mazwi akakosha? Kuongorora izvi nguva nenguva kunozokuisa kune vazhinji vateereri vevangangodaro vashanyi. Izvo zvakare ichavaka yako pachako network uye chiremera kana iwe uri kupa yakakosha ruzivo.
Batanidza-kubhaiza ichiri nzira inoshanda kwazvo yekuwedzera traffic. Maererano ne Tsvaga Engine Journal, 5 mhando dzenyaya dzinoita sedzinogadzira yakawanda backlinks uye yakawanda yehutachiona chiitiko. Ivo ndeNhau, Kupesana, Kurwisa, Resource uye Humor. Iyi blog post, semuenzaniso, ndeye chinyorwa chinyorwa.
Tags: kuwedzera traffic
Nzira mbiri dzinoshanda kwazvo dzekukudziridza yako Email Chinyorwa
WordPress Backup Chengeto… Wawana Imwe?
Zvita 3, 2011 na9: 19 PM
Ini ndinobvuma. Ini handigoni kumira "vasingazivikanwe zvemukati vanyori". -
Runyorwa rukuru. Kuwedzera, ndiri kushandisa zvakare mifananidzo yakanaka pamapeji angu uye ndigovane paPinterest, Facebook, Instagram uye chinongedzo kune yangu webhusaiti. Kugadzira yemhando vhezheni yezvangu zvemukati uye nekugovana ivo paSlideShare.net, Scribd uye mamwe mafaera ekugovana nzvimbo zvinobatsirawo kukura vateereri vangu uye traffic.